Ungazisebenzisa kuphi izingxenye zepulasitiki
Isikhathi Iposi: Oct-16-2020
Izingxenye zepulasitiki zenziwa ngokubunjwa kwesikhunta nezinye izindlela zokucubungula, lapho ubukhulu nomsebenzi zihlangabezana nezidingo zabaklami. Ngaphezu kwe-80% yezingxenye zepulasitiki zibunjwe ngomjovo wokujova, okuyindlela eyinhloko yokuthola izingxenye zepulasitiki ezinemba kahle. Jova ...Funda kabanzi »
10 izinhlobo resin plastic kanye nesicelo
Ukuze senze kahle ekwakhiweni nasekwakhiweni kwemikhiqizo yepulasitiki, kufanele siqonde izinhlobo nokusetshenziswa kwepulasitiki. IPlastiki luhlobo lwenhlanganisela ephezulu yamangqamuzana (ama-macrolecule) afakwa polymerized ngokufaka i-polymerization noma ukusabela kwe-polycondensation nge-monomer njengezinto ezibonakalayo. Kunezihlobo eziningi ...Funda kabanzi »
Liyini ibhokisi lepulasitiki lezokwelapha
Ibhokisi lepulasitiki lezokwelapha (elibizwa nangokuthi ibhokisi lomuthi) noma amabhokisi ezokwelapha epulasitiki, asetshenziswa kakhulu ezibhedlela nasemindenini. Ingasetshenziselwa ukugcina izidakamizwa, amadivayisi wezokwelapha noma ukuwaphatha ukubona iziguli. Ibhokisi lezokwelapha, njengoba igama lalo lisho, liyisitsha sokugcina i-medi ...Funda kabanzi »
Ngokuthuthukiswa komkhakha wesimanje, kunezinto zepulasitiki ezanda kakhulu. Ngasikhathi sinye, imikhiqizo yepulasitiki nayo isetshenziswa kabanzi ezimbonini ezahlukahlukene. Ikakhulukazi, izingxenye zepulasitiki eziya ngokuya zisetshenziswa. Manje ake sabelane nawe ngamathiphu wezingxenye zepulasitiki eziqondile ...Funda kabanzi »
Ungamkhetha kanjani umenzi wakho wesikhunta somjovo
Injection isikhunta uhlobo lwethuluzi lokwenza izingxenye zepulasitiki noma zehadiwe. Isakhiwo somjovo womjovo siqondile futhi siyinkimbinkimbi, futhi kufanele sibe nempilo yesevisi ephezulu yezinkulungwane ezingamakhulu amaningana yemijikelezo yomjovo. Luhlobo lwemishini yenani eliphakeme, futhi ikhwalithi yalo idlala ...Funda kabanzi »